सेयर बजारमा चलखेल हल्ला कि वास्तविकता ? – KhabarTime
सेयर बजारमा चलखेल हल्ला कि वास्तविकता ?
काठमाडौं । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) परिसूचक ७२ अंकले बढेर दुई हजारमाथि पुग्यो । यो बृद्धिले आइतबार नेप्सेमा गएको १२३ अंकको पहिरोबाट आत्तिएकाहरूलाई केही राहत दियो । पछिल्लो तीन महिनामा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५ सयभन्दा धेरै अंकले उकालो लागेको छ । १५ सय हारहारीमा रहेको परिसूचक बढेर २ हजार ४ पुगेको छ ।
स्टक बजार घटबढलाई असमान्य मानिँदैन । तर पछिल्लो समयमा रातो र हरियो रंग भने ‘अस्वाभाविक’ भएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ । बजारलाई प्रभाव पार्न सक्नेहरूले चलखेल गरेर फसाए की भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।
सेयर बजार नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको एउटा अध्ययनले पनि चलखेलको आशंकामा बल पुर्‍याएको छ । पछिल्लो पटक बोर्डले गरेको अध्ययनले ३१ कम्पनीको मूल्य अस्वभाविक रुपले बढेको उल्लेख गरेको छ । ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बढ्नुपर्ने उल्लेख्य कारण नहुँदा पनि बढेको भन्दै बोर्डले लगानीकर्ताहरूलाई ध्यान दिएरमात्रै लगानी गर्न आग्रह गरेको छ ।
तर अध्ययन रिपोर्टलाई चलखेल भएको भनेर ठोकुवा गर्न नमिल्नै बोर्डकै अधिकारीहरू बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको तरलता र प्रविधिका कारण सेयर बजार बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकको ब्याज कम हुँदा कतिपयले ऋण लिएर पनि लगानी गर्छन् । ‘बैंकले दिने ब्याज भन्दा सेयर किन्दा आउने प्रतिफल धेरै हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकषिर्त भएको हुनसक्छ’ गिरी भन्छन् ।
सेयर बजारका विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्यालले पनि बजार घटबढ हुने प्रक्रियालाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘बजार बढ्दा पनि चलखेल भयो रे अनि घट्दा पनि चलखेल रे । के बजार सँधै स्थिर हुनुपर्ने हो र ?’
नोवेल कोरोना भाइरस -कोभिड-१९) लक्षित लकडाउनपछि घरमा बसेर सेयर खरिदबिक्री गर्ने लगानीकर्ताको संख्या बढेको छ । दैनिक ६० हजार हाराहारीमा कारोबार हुने गरेको छ । जबकी लकडाउन अघि नियमित कारोबार लगानीकर्तामा अनलाइनबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ता औसत १५ प्रतिशत थिए । अनलाइनबाट कारोबार गर्नेहरू ८५ प्रतिशत नाघेको कार्यकारी निर्देशक गिरी बताउँछन् । ‘हामीले नियमित अध्ययन गरिरहेका छौँ, बजारमा चलखेल हामीले देखेका छैनौं’ उनले भने, ‘ऐनमा नै हाम्रो जिम्मेवारी तोकिएकाले लगानीकर्ताहरुलाई सजग/सचेत भएर लगानी गर्नु भन्ने गरेका छौं ।’
लगानीकर्तालाई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरेर लगानी गर्न आग्रह गर्छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउँद पूँजी बजार पारदर्शी भइसकेको र कारोबारहरु अधिकांश बैंकिङ च्यानलबाट हुने भएकाले चलखेल भएको छ भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
झसंग पार्ने पहिरो
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बिहीबारसम्मको कारोबार आफूलाई सामान्य लागेपनि आइतबारको कारोबारले भने झसंग बनाएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेण्डिङको सीमा घटाउने संकेत गरेपछि लगानीकर्ताहरु अत्तालिएर सेयर बेचेका कारण १२३ अंकको पहिरो गएको उनी बताउँछन् ।
‘एक्कासी आएको भूकम्पले म पनि झसंग भएँ, यो कुनै सिरियस कुरा थिएन तर लगानीकर्ताहरु एक्कासी आत्तिएर सेयर बिक्री गर्दा बजारमा पहिरो गयो’ रौनियारले बताए । मौदि्रक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाकै कारण धेरै जना आत्तिएको भन्दै उनले आत्तिनु पर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए । यहाँ चलखेल भन्दा आत्तिने काम धेरै भएको उनको सुझाव छ ।
बजारमा परिपक्व नभएका लगानीकर्ताहरु रहेका कारण बजार धेरै अस्थिर देखिने गरेको उनी बताउँछन् । घट्न लागेपछि बेच्ने अनि बढेको बेला किन्ने अपरिपक्व लगानीकर्ताका कारण चलखेल गर्न खोज्नेहरुलाई प्रोत्साहन गरे जस्तो देखिएको उनले बताए । अब राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार मैत्री नीति नै लिने भनेकाले डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको अध्यक्ष रौनियारले बताए ।
अहिलेको बजारमा कुनै पनि चलखेल नभएको नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन् । बैंकमा लगानी हुन नसकेकेा पैसा लगानीकर्ताहरुले ऋण लिएर पनि लगानी गरिरहेको उनले बताइन् । ब्याजदर सस्तो हुँदा बजारमा लगानी गर्नु फाइदा हुने देखिएकाले पनि लगानीकर्ताहरु सेयर बजारमा आकषिर्त भएको उनको तर्क छ ।
पुँजीकरणमा १० खर्ब बृद्धि
४ वर्ष पहिले सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १ हजार ८ सय ८१ मा पुगेर उच्च विन्दु कायम भएको थियो । तर नेप्सेले त्यो माथि नयाँ इतिहास रच्न भने सकेन । १ हजार ८ सय ८१ बाट ओरालो लागेको नेप्से ग्राफ १ हजार १ सय हाराहारीसम्म झर्यो ।
२० खर्ब हाराहारीमा रहेको सेयर बजारको पुँजीकरण पनि ५ खर्ब भन्दा धेरैले घट्यो । धेरै लगानीकर्ताहरु आत्तिए । बजारको विषयलाई लिएर निकै चिन्ता प्रकट भयो । बजारको विकास र विस्तारको माग गर्दै लगानीकर्ताहरु आमरण अनसन समेत बसे ।
पछिल्लो चौमासिक तथ्यांक हेर्ने हो भने नेप्से ग्राफ बढ्दो छ । २०७७ असारमा १ हजार ३ सय ६२.४ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक अहिले २ हजार माथि पुगेको छ ।
पछिल्लो ४ महिनाको अवधिमा नै सेयर बजारको पुँजीकरण १० खर्ब भन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ । २०७७ असार मसान्तमा धितोपत्र बजार पँुजीकरण १७ खर्ब ९२ अर्ब ७६ करोड थियो । यो बढेर गत शुक्रबारसम्म २७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
२०७६ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण रु. १५६७ अर्ब ५० करोड रहेको थियो । बजार पुँजीकरणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २०७६ असार मसान्तमा ४५.३ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २१४ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ३३ जलविद्युत्कम्पनी, १९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ४/४ होटल तथा व्यापारिक संस्था र ५ अन्य समूहका रहेका छन् । २०७६ असारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २१५ रहेको थियो ।
‘अहिलेको बजार कुकरको सिटी ताते जस्तै हो’
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अहिलेको सेयर बजारलाई कुकरको सिटीसँग तुलना गर्छन । विस्तारै तात्दै गरेकेा कुकर एकै पटक सिटी लाग्दा केके न भए जस्तो लाग्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको बजार भनेको कुकरको सिटी हो, आत्ति हाल्नु पर्ने देख्दिन ।’ उनले प्रेसर कुकरको सिटी जस्तै बजार केहि समयमा बज्न छाड्ने उनले बताए ।
बजार एकदमै उकालो लागेका कारण सिमित व्यक्तिले चलखेल गरेकेा हो कि जस्तो भने देखिएको उनी बताउँछन् । तर कारोबार रकम ८/९ अर्ब पुग्नुलाई त्यति ठूलो रकम भने मान्न नहुने बताए । बजार एकदमै तल भएका कारण अहिले अलिकति बढिहाल्दा सिटी लागेको रुपमा मात्रै बुझ्नु पर्ने उनले बताए ।
‘मार्केट क्रिम भन्छौं हामी, क्रिम लिएर मेजर लगानीकर्ताहरु हिडिहाल्ने अनि अन्यलाई डुबाउने हुन्छ, पछिल्लो हप्ता कुनैकुनै कम्पनीमा यो भएको हो कि जस्तो देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर यसले गरे, उस्ताले गरे भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन किनकी यहाँ संस्थागत होइन सबै व्यक्तिगत लगानीकर्ता मात्रै छन् ।’
बजार पुँजीकरण पहिलेको भन्दा धेरै बढेका कारण पनि कारोबार रकम ठूलो देखिएको उनको बुझाई छ । सूचीकृत कम्पनीहरु पनि बढेको र बैंकिङ बाहेकका अन्य क्षेत्रको हिस्सा पनि बढेका कारण कारोबार रकमलाई उत्पातै बढेको रुपमा लिन नहुने उनले बताए ।
सोमबार बिहानै यसरी गर्नुहोस् भगवान शिवको आराधना